အွန်လိုင်း Toolkit ကို-အခမဲ့ Converter, Formetters, CSS ကို Minifiers, ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်
Web development & ဒီဇိုင်နာသည်အွန်လိုင်း Tools များ
ကျနော်တို့ကို web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များပြည့်စုံသောစာရင်း compile,
အကြောင်း, သင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသော, ပျော်စရာဖြစ်ကူညီဖို့အသိပေးနေဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်ဘို့ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Youtube ကိုဗီဒီယို & Audio Downloader အွန်လိုင်း
သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် youtube ကမှဗီဒီယိုကို download လုပ်များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
Facebook က Video Downloader အွန်လိုင်း
သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် facebook မှဗီဒီယိုကို download လုပ်များအတွက်ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
hex, RGB, HSV နှင့် HSL အကြားအရောင်ပြောင်းလဲခြင်း
MD5 format နဲ့အွန်လိုင်းဝဘ် tool ကိုမှစာဝှက်တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံကစာသား
ငါ့ရဲ့ဇာတ်မြင့် - Dummy စာသားကိုနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အွန်လိုင်းဝဘ် tool ကို
URL encoding ကုဒ်ဖြုတ်
အွန်လိုင်းကုဒ်ဖြုတ် URL ကို URL ကိုဝှက်အခမဲ့အွန်လိုင်းဝဘ် tool ကို
base64 ကုဒ်မှ string ကိုဝှက်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းတစ်ဦး base64 ကုဒ်ကုဒ်
JSON စာဖတ်သူကို, ကြည့်ရှုသူတရားဝင်, formatter အခမဲ့အွန်လိုင်း tool ကို
ထီများအတွက်ကျပန်းနံပါတ်များကို Pick နှင့်ပိုပြီး
အွန်လိုင်း CSS ကို Minify / Unminify Tool ကို
ဖိုင်အရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ Minifier & Unminifier CSS ကိုဖိုင်များ, ကို download အကြိမ်ပေါင်း optimized နှင့်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြရန်လွယ်ကူလာ
နည်းဖို့ CSS ကို
နည်းဖို့ CSS ကို convert - အခမဲ့အွန်လိုင်းဝဘ် tool ကို
1) က်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးရေး Tool ကိုကဘာလဲ?
အသုံးဝင်သော tool များကိုဝဘ်ဒီဇိုင်နာနှင့်ဝက်ဘ်စီမံကိန်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မာစတာများအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ရရှိနိုင်ကြသည်။ Web development tool ကိုတစ်ထောကျအကူပွု tool ကိုဖွစျစနေို; ထိုကဲ့သို့သောက HTML သို့မဟုတ် CSS ကိုကုဒ်များသည်သက်တမ်း tool အဖြစ်, tool ကို, အန်ကုက်လုပ်ပါနဲ့ကုဒ်ဖြုတ် tool ကိုသို့မဟုတ် download, tool ကိုချုံ့။ အွန်လိုင်းကိရိယာတန်ဆာပလာအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက် tool ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
အခမဲ့ web Tools များ
ဝဘ်ဒီဇိုင်နာနှင့်ယနေ့ခေတ်မာစတာဝဘ်စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုးပေးရန်အခမဲ့အွန်လိုင်း tools တွေအများအပြားအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ထိုမှတပါး, Web development tool ကိုတစ်ထောကျအကူပွု tool ကိုဖွစျစနေို; ထိုကဲ့သို့သောက HTML သို့မဟုတ် CSS ကိုကုဒ်များသည်သက်တမ်း tool အဖြစ်, tool ကို, အန်ကုက်လုပ်ပါနဲ့ကုဒ်ဖြုတ် tool ကိုသို့မဟုတ် download, tool ကိုချုံ့။ ဒီလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်, အွန်လိုင်းကိရိယာတန်ဆာပလာတစ်ခု updated tool ကိုတူသောဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်သမျှသောအသုံးပြုသူများအတွက်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းတဲ့အခမဲ့က်ဘ်ဆိုက် tool ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
2) အဘယျက Web ရေးကိရိယာများကို web ဒီဇိုင်နာနှင့်မာစတာဘို့ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါသလား
CSS ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့် web ကုဒ်အတည်ပြုချက်နဲ့တူ Tools များ, Compressor နဲ့ converter ကို web ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သော tool ကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့လုံးဝပင်ပိုမြန်လွယ်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာလုပ်ကိုင်ဖို့ကို web ဒီဇိုင်နာနှင့်မာစတာကိုကူညီနိုင်ပါတယ်။
3) Web Designer များနှင့် Webmaster ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်အွန်လိုင်း tools တွေလိုအပ်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်နည်း
အွန်လိုင်း tools များကြောင့်အလမ်းကို အသုံးပြု. အဆင်ပြေ၏ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်နာနှင့်မာစတာကိုကူညီပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဘယ်သူမျှမတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်ရှိသေး၏။ ထို့အပွငျ, အွန်လိုင်းဝဘ် tools တွေနဲ့လည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုမှာမဆိုအချိန်ကနေဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ အဆိုပါ tools တွေနဲ့အလုပ်ကအရမ်းမြန်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။
4) မညျကို web tools တွေအကူအညီနဲ့က်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးရေး Free နိုင်သလား?